FAQ - Bits Century
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ Website တစ်ခုကိုဘယ်လို တည်ဆောက်ရမလဲ ?
Bits Century သို့ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပုံစံဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်မလဲ?
Bits Century တွင် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ပိုင် Customer Dashboard ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Support Tickets, Live Chat တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး Phone, Email, Viber, Whatapps, Messenger တို့ဖြင့်လဲဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Bits Century ၏ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပြောပြပါ ?
လူကြီးမင်း ရယူလိုသော ဝန်ဆောင်မှုအား ကြိုတင် ဆွေးနွေး အကြံပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊ အသေးစိတ်အား ဤ link တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Bits Century မှ ငွေပေးချေမှု ပုံစံကိုပြောပြပါ ?
Bits Century သို့ KBZ, CB, AYA Bank, KBZ Pay, CB Pay များနှင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
Contract ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသလား ?
ဟုတ်ကဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ရယူလိုသော ဝန်ဆောင်မှုအလျှောက် Bits Century နှင့် Contract ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပက်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား ?
ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပက်သက်၍ အရည်အသွေး ကိုက်ညီခြင်း ၊ ပြည့်မှီခြင်းများ မရှိပါက Money Back Guarantee ဖြင့်ပြန်လည်တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
Bits Century ၏ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဘာလို့စျေးသက်သာရပါသလဲ ?
Bits Century သည် Online Marketplace တစ်ခုဖြစ်ပြီး Sources များအားလုံးသည် Bits Century မှ ဝယ်ယူထားခြင်း ၊ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းများ ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်နှင့်ကုန်ကျ စရိတ် ပိုမိုသက်သာပါသည်။
Bits Century ၏ ရုံးခန်းသို့လာရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါသလား ?
Bits Century သည် Online Marketplace တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Zoom,Google,.. တို့ ဖြင့် Meeting ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး Online သီးသန့်ဖြစ်ပါသည်။အလုပ်အပ်နှံပြီး လိုအပ်ပါက လူကြီးမင်း၏ ရုံးသို့လာရောက် ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Bits Century နှင့် ရေရှည်တွဲလုပ်လို့ရပါသလား ?
Bits Century သည် Marketplace တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး ၊ လူကြီးမင်း ရယူသော ဝန်ဆောင်မှု အလျှောက် Update ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ သတင်းနှင့် Tutorails များထောက်ပံပေးခြင်း ၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Bits Century သည်တရားဝင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသလား ?
Bits Century သည် DICA တွင် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားဆဲ Company တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။